Kutanga, kusanganisa, 1 seti 20L yekusanganisa tangi; Kusanganisa kumhanya kunogona kuchinjika; Chisanganiso scrapper nyore kubvisa uye reassembly; CW nguva uye CCW nguva inogadziriswa; Tangi inogona 90degree yakavhurika kuburitswa zviri nyore rwechipiri, extrusion, 1 seti 10L tangi; Screw kubva kudivi rekuseri nekudzvanya fr ...
Muna 2020, isu vanopinda CBE zvakanaka muShanghai kubva July 8 -12. Isu tinoratidza zvigadzirwa zvedu zvikuru, senge rotary lip gloss yekuzadza muchina, kusundira mhando lip gloss mascara yekuzadza muchina, compact poda yekutsikirira muchina, yakatwasuka yekunyora muchina, cosmetic packagings yemuromo gloss, l ...
Isu tinogadzira iyo inoyerera yekuzadza muchina waEstee Lauder
Model EGSF-01A swiring yekuzadza muchina ndeye otomatiki inopisa yekuzadza muchina yakagadzirirwa kugadzirwa kwemvura hwaro uye toner gel. Yayo indexing shandura tafura ine gumi nemaviri pucks, 3 inoshanda chiteshi Iyo ine 4set ye10 L yekupisa tangi ine musanganisi Operator kurodha pani / mabhodhoro ini ...
2020 Zvita Yakagadziridzwa auto compact poda kudzvanya muchina
Compact poda yekutsikirira muchina inogona kuita mumvuri weziso, kutsvuka, maviri nzira keke, yakadzvanywa cosmetic hwaro, kumeso yakadzvanywa poda. Yedu compact poda yekutsikirira muchina inogona kuita yakatenderera yakatsikwa poda uye zvakare mraba yakatsikwa poda kune mumwe muchina. Yedu auto compact poda kudzvanya muchina iri muhombe mhando mac ...
2020 Gumiguru yemuromo yekuzadza gloss muchina, isu tinoita gadziriso nezve yekupisa matangi shanduko pamusoro
Zvinoenderana nezvinodiwa kubva kune vatengi, isu tinoita muromo wekupenya girazi nemafuta ekupisa. Heating tank yakagadzirirwa musanganiswa uye yekumanikidza chishandiso kuwedzera kumanikidza kune yakakwira viscous mvura yekufamba pasi mushe kana uchizadza. Heating tangi iri bhachi tangi, yepakati iri heatin ...